Booktype Converter: Change Booktype in la hagaajiyo DVD Dhignaashada
1. ImgBurn u Mac
2. ImgBurn lagu bedelan karo
4. Isticmaal ImgBurn in Guba Files
> Resource > DVD > Sida loo beddel Booktype / Bitsetting la ImgBurn?
Sida loo beddel Booktype / Bitsetting la ImgBurn?
Maqaalkani waxa uu barayaa aqoonta ku saabsan booktype DVD disc (ama bitsetting). Waa fudud iyo hage sahlan waxaa kaloo la siiyaa inay wax ka bedesho booktype la ImgBurn DVD free qalab. Aqoon hore looma baahna. Akhri oo si fudud u xaliyaan dhibaatooyinka DVD waafaqsan ciyaartoy DVD iyo Console ciyaarta.
Waa maxay Booktype / Bitsetting?
The nooca buugga waa beer afar gelinno in uu soo bandhigayaa bilowgii DVD disc kasta. Qalab badan sida DVD drives isticmaali doonaa arimahan si loo ogaado haddii ay tahay a DVD-R / RW, DVD + R / RW ama DVD-ROM (akhri oo keliya) iyo ogaado sida disc DVD ah waa in la daaweeyaa. Eeg shaxda hoose u code ee noocyada DVD disc.
0010 DVD-R ama DVD-R DL
1101 DL DVD + RW
Maxaad Change Booktype / Bitsetting?
Hoos waxaa laga yaabaa in sababaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in la beddelo booktype ama bitsetting. Waxaa oo dhan oo ku saabsan arrimaha waafaqsan. In eray, beddelo booktype / bitsetting kaa caawinaysaa in aad xal u helidda dhibaatada waafaqid, laakiin la soco in aysan mar walba guusha. Waa halis ugu adiga kuu gaar ah si ay u baabba'aan cajalladaha iyo / ama xogta aad.
1. qalab ayaa la soo saaray ka hor si gaar ah nooca buug wixii lagu qeexay keentay ku fashilmeen in ay akhriyaan cajalladaha ah.
2.DVD-R iyo DVD + R waafaqsan. DVD-R waa qaab ka weyn yahay DVD + R, qaar ka mid ah DVD drives akhrin kara DVD-R, halkii DVD + R. Beddelidda in booktype DVD-ROM inta badan garaaci doonaan dhibaatadan si aad isticmaali kartaa DVD cajalladaha aad ah ciyaaryahanka DVD jir ama Console kulan.
Sida loo beddel Booktype / Bitsetting?
Xaddi badan oo DVD gubidda variably jaban ogolaado in aad bedesho Booktype / Bitsetting. Dabcan, waxa kale oo aad ka beddeli karo DVD booktype disc oo lacag la'aan ah, sida isticmaalka ImgBurn. ImgBurn waa CD ah oo khafiifa weli awood badan oo xidhmo DVD la xiriira. Waxaad wax kasta oo la xiriira DVD waxaa la samayn karaa. Maanta, waxaad ku baran doontaa sida loo beddelo booktype / bitsetting in ImgBurn.
First ImgBurn download halkan haddii aad weli ma helay waxaa ku rakiban. Marka laga furay, guji icon ugu horeysay ee khaanadda saxda ah ama u tag " Mode dhista "oo u baddashaan tab Device on xaq. ImgBurn idin ​​tusin doontaa faahfaahin ku saabsan qalabka DVD in joogo, iyo sidoo kale disc kasta oo la geliyo drive laftiisa.
Next, riix Book icon ee geeska bottommost inay soo qaadaan hoos ku hadal,
Waxaad saarayaasha badan oo uu ka soo xusho halkan. Xusuusnow, drives qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in aysan haysan magacyada brand, laakiin drive laftiisa laga yaabaa in lagu sameeyo mid ka mid ah shirkadaha. Sidaas oo keliya xulo soo saaraha. Markaasay aad u hesho fursadaha ay jiraan: Change for, goob hadda, iyo goob New.
In "Change for" liiska dropdown, dooro nooca warbaahinta aad rabto in aad beddesho booktype ee. Iyada oo ku xidhan model drive, waxaad beddeli kartaa booktype u DVD + R, DVD + R DL iyo / ama DVD + RW. Si kastaba ha ahaatee, tani ma kala duwan yihiin model si ay u qaabeeyaan.
Doorashada ugu muhiimsan waa "goob New", aad si weyn lagu talinayaa in wax laga beddelo si DVD-ROM badan waafaqsan balaadhan, taas oo ujeedada qoraalkan. Marka aad dhamaysid, waxaad ka heli doontaa si deg deg ah ayaa sheegay "Guusha" iyo hambalyo, waxaa dhici karta inaad ka ciyaari kara DVD sida caadiga ah wax kasta oo qalabka socon (ciyaaryahanka DVD, Console ciyaarta ...) la booktype bedelay DVD cajalladaha.
Beddel Talooyin DVD Booktype
Haddii ay disc maran, si loo xaqiijiyo booktype DVD ah, waxaad ku gubi karaa iyada oo ImgBurn iyo dib-u-warqadda si DVD drive. Markaa waa inaad aadaa " Mode Read "si loo eego warbixinta. Haddii ImgBurn u sheegay sida DVD-ROM, markaas oo dhan ayaa diyaar u ah in ay isku dayaan oo aad DVD hardware.
Guba DVD ee Mac
ImgBurn waa kaliya diyaar u ah Mac, si ay u gubaan DVD fayl ee Mac. Waxaad isku dayi kartaa DVD Creator for Mac (version Windows sidoo kale la heli karo) ka Wondershare. Waa qalab sahlan weli awood leh DVD movie gubashadii taageera oo dhan qaabab video caanka ah, sida AVI, MP4, MOV, wmv, MPEG, MKV, iwm sidoo kale HD videos (MTS / M2TS / TS / TP / TRP).
ImgBurn for Windows 8 - Guba kasta Video inay DVDs Si fudud
The Top 5 Professional Data Gubidda Softwares
Top 10 Best lagu bedelan karo oo bilaash ah si ay u PowerDVD
Sida loo isticmaalo DVDStyler DVD qoraalka Software